I-XXL Almhaus ngokuthe ngqo kwindawo yokuhamba ngeenyawo kubantu be-10
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguChristiane
Linathi lixesha lokuphuma endlwini siye kwindawo yokukhwela intaba! I-Almhaus yethu ikulindele kanye kwindawo entle yokunyuka iHochrindl enendawo ukuya kuthi ga kwi-10 yabantu kumagumbi aphindwe kabini ama-5.
Indawo ethanda ukutyibilika etyibilikeni kunye nokunyuka intaba iHochrindl, kanye ngaphandle komnyango wangaphambili, ikulindele ngeendlela ezikhethekileyo zokuhamba intaba kuwo onke amanqanaba obunzima kusapho lonke.
Uhlala kwindlu exhotyiswe ngokupheleleyo enegadi enkulu kuwe. I-grill kunye neebhentshi zokhuni ezitofotofo egadini zikumema kwi-idyllic barbecue ngokuhlwa. Igumbi lokuhlambela lesibini litsha ngokupheleleyo kwaye lalungiswa ngo-2021. Amagumbi amahlanu atofotofo aphindwe kabini, igumbi lokuhlala elikhulu elinomabonakude wesathelayithi, iWiFi yasimahla kunye nekhitshi elipholileyo lokutyela elinesitovu samaplanga likulindile. Ngamagumbi okuhlambela amabini kunye nezindlu zangasese, akukho xinzelelo kusasa ngaphambi kokuba uhambe.
4.86 ·Izimvo eziyi-7
Indawo yodwa. Ngokuthe ngqo kwi-ski slope kwaye ngasekunene ecaleni kwe-ski lift. Ayinakuba ngcono okanye ilunge ngakumbi.
Asikho ngokobuqu kwisiza, kodwa sifumaneka ngokukhawuleza nangaliphi na ixesha xa kukho iingxaki endlwini kwaye ngaphakathi kweyure ye-1 kwiHochrindl.